Syria: Fikarakaràn’ny Homs Sakafo Anaty Fahirano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Mey 2014 9:36 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Español, Deutsch, Italiano, عربي, Català, 日本語, čeština , Ελληνικά, English
Navoaka voalohany tao amin'ny Syria Untold ity lahatsoratra ity.
Hamburgers Homs, mofomamin'ny fahirano, pizza maozatra… Ireo indray izao no fomba iantsoan'ny vahoaka Homs ny sakafon-dry zareo tato ho ato, 24 volana niainana fahirano nanery azy ireo hihinana izay azony raisina. Miainga amin'ny bozaka maniry eny amoron-dàlana ka hatramin'ny sokatra, vorona ary bibikely, tongan-dry zareo Homs amin'ny haavo hafa mihitsy ny làzan-dry zareo amin'ny fahaiza-mamorona sy ny tsy fakàna sarotra amin'ny fiainana.
Mofo “manaqish” nentim-paharazan'ny Siriana, nokarakaraina tao amin'ny tanàna Homs iharan'ny fahirano. Loharano: Pejy Facebook “Meals Under Siege” (Sakafo iharan'ny fahirano)
Sakafo iharan'ny fahirano
Ny Aprily 2014, noforonina ny pejy iray ao amin'ny Facebook ary nomena anarana hoe “Meals under the siege”, ho toy ny sehatra iray ifanakalozan-dresaka momba ny fomba hiatrehana ezaky ny fitondrana hanao izay hahamosarena ny vahoaka mba handemena azy. Lafarinina, vary, varimbazaha, ary izay vokatra fototra rehetra hita hatry ny fahagola tany an-dakozian'ny Siriana tsirairay tany no nosakanana tsy ho an'ireo mponina an'aliny ao amin'ireo faritra natao fahirano. Ho fialohavana làlana ny fahirano, nanangona sasantsasany tamin'ireny vokatra fototra ireny ny sasany tamin'ny mponina, saingy vetivety ihany dia lany ireny.
“Renin'ny fahaiza-mamorona ny filàna, hoy izy ireo,” lehilahy iray monina ao amin'ny tanàna tranain'ireo Homs no nilaza izany tamin'ny Syria Untold. “Eo indrindra isika izao, manandrana mikarakara ny manaqish amin'izay zavatra hitanay izahay, isan'izany itony voamaina hitanay itony saingy tsy mbola mampitovy hevitra anay ny hoe hanitra ve izy itony sa henna”. “Na izany na tsy izany, asianao sira kely fotsiny, dia …azo hanina!”, hoy izy manampy.
Natosiky ny filàna ihany koa ireo mponina any amin'ireo faritra iharan'ny fahirano ireo mba hihinana izay loharano-nà proteina hitan-dry zareo. Tafiditra amin'izany ny sokatra, vorona ary bibikely, izay tsy tao anaty hainahandro Siriana velively tany aloha tany.
Laoka vita avy amin'ny fangaro-nà figue sy nèfle . Loharano : pejy Facebook “Meals Under Siege”
“Ampangotrahanao ny henan-tsokatra, ary avy eo ampiana nèfle sy figue, na mikarakara azy ho toy ny lasopy. Raha ny marina, tena tsara mihitsy ny henan-tsokatra amin'ny toe-draharaha tahaka izao.”
Ny fahafehezana azon-dry zareo Homs eo amin'ny sehatr'ity fahaiza-mamorona hainahandro rehefa iharan'ny fahirano ity dia lasa zavatra iray ilain'ireo mponina any amin'ny faritra hafa ao Syria iharan-javatra tahaka izao ihany koa. Nalaina saripika ary nozaraina ao amin'ny Facebook ireo sakafo nokarakaraina isanandro, mba hahafahan'ny hafa maka hevitra sy mampiasa ireo zavatra kely eo an-tànany.
Tsy mivadika amin'ny lazan-dry zareo hoe tsy maka sarotra, milaza ny toe-draharaha iainany ireo mponina Homs ary arahany fanehoankevitra toy ny hoe “Vao avy nikarakara an'ity voronkely ity indrindra aho izao saingy kely loatra lery ka tsy haiko izay hilazàna azy na biby izy ity na ho hanitra fanomezana tsiro”, ary “Niteny tamiko ny namako iray hoe nilaza taminy ny hazom-boalobokany ka niteny fa matahotra ny hivoaka ireo ravina, taorian'ny nahitàny ny nanjo ny mpifanolo-bodirindrina taminy.”
Mandingana ny sàkana rehetra
Ho an'ny mpitazana ety ivelany, ny sàkana ara-tsaina izay ilaina tapahana mba hahafahana mihinana zavatra iray tsy noheverina velively ho fihinana dia toa mafy tokoa ny handinganana azy. Saingy ho an'ireo Siriana iharan'ny fahirano dia nihoarany lavitra io teboka io. “Rehefa noana ianao, tsy misy sàkana ara-tsaina izany manoloana izay zavatra rehetra azo hanina.”
Ny fahaiza-mamorona sy ny tsy fivakiana loha dia manampy ireo olona iharan'ny fahirano hanohitra ny politikan'ny fitondràna manao izay haha-mosarena azy ireo. Nefa na dia ireo sakafo zara raha nisy notantanan-dry zareo aza efa manomboka ho lany. Rehefa anontaniana momba io, dia hoy ny valintenin'ilay mpanome vaovao anay:
“Tsy afaka misaina afa-tsy ny anio aloha izahay. Izay hitranga rahampitso, tsy fantatray, nefa rehefa misaina izahay hoe tapitra tsy misy tavela intsony ny tahiry, mahita zavatra hafa azo hanina indray izahay. Antenainay fa hanohy hanome hatrany Andriamanitra.”
Sakafo vita tamin'ny valàla. Loharano : pejy Facebook “Meals Under Siege”
Anatin'izay ihany, ilay pejy Facebook nampakàrana ny sarin'ireo sakafo dia ahitàna fanehoankevitra manasongadina ny hoe “afaka ny hifaly ny olona iray na dia ao anatin'ny fotoana faran'izay sarotra indrindra aza. Ny mavesa-danja dia ny fanànany fitoniana manoloana ny tenany ihany, sy Andriamanitra.”
Hatrany amin'ny fihetsiketsehana voalohany indrindra izay nidinan'ny olona an-jatony maro teny an-dalàmbe, tamin'ny Martsa 2011, ka mandraka androany, mitohy mampianatra an'izao tontolo izao ny dikan'ny hoe hajan'ny tena, fanoherana ary fahaiza-mamorona manoloana zava-tsarotra ireo vahoaka Homs.